3 Shuruudaha lagama maarmaanka u ah Codsi Websaydh kasta | Martech Zone
Talaado, July 1, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Inbadan iyo in ka badan, waxaan is arkaa aniga oo weydinaya waratada iyo shirkadaha isla su’aalo isku mid ah. Haddii aad ka fekereyso inaad sameysid dalab kuu gaar ah, kuwani waa 3 astaamood oo u baahan in la isku daro laga bilaabo maalinta koowaad ee arjigaaga haddii aad rabto inaad hadhow keydiso ilahaaga.
Codsigaagu ma sameeyaa…
Hayso a API? Uma baahna inay ahaato mid khaas ah ama adeeg internet web wax kasta oo ol 'caadi ah oo' XML 'ah ayaa sameyn doona. Waxaan dooneynaa inaan ku dhex darno codsigeenna maalin maalmaha ka mid ah si aan u qalabaynno una fududeyno macaamiisheenna inay maareeyaan haysashada teknoolojiyad badan. Haddii aan maanta bilaabi lahaa arji, waxaan ka shaqeyn lahaa API dibedda, ka walwalsan isdhexgalka isticmaale ka dib… laga yaabee xitaa inaad haysato UI-ga dhexgalka API si loo hubiyo inaan si fiican u dhisnay.
Hayso Muuqaal Hay'ad? Waxaan dooneynaa inaan ku iibino macaamiisheena arjigaaga, laakiin waxaan jeclaan laheyn inaan iyaga u maamulno. Waa kuwan tusaale: Maxay diiwaangeliyayaashu u leeyihiin Xisaabaadka Wakaaladda halkaas oo macmiilku ku ilaalin karo lahaanshaha bogga, laakiin Hay'addu maareyn karto… iyo xitaa bixinta… diiwaangelinta? Waxaan qoray diiwaanhaygayga caawa waana kugula taliyay tan.
Hayso Muuqaal Shirkadeed? Shirkado badan iyo kuwa badan ayaa ah uruurinta kuwa yaryar. Warbixinta waa in la isu geeyo heerar kala duwan sida urur leeyahay. Madaxweyne ilaa Qeybta VP ilaa Maareeyaha Gobolka ee Xisaabaadka… qof walba waa inuu awood u yeeshaa rukhsad gelitaan iyo sidoo kale warbixin kooban oo heer kasta ah oo u dhexeeya.
Shuruudaha caadiga ah ee dhab ahaan la sameeyo waxa ay tahay waxaad u baahan tahay iyo sidoo kale shuruudaha amniga marwalba way khuseeyaan; si kastaba ha noqotee, shuruudaha aan kor ku soo sheegay badiyaa waa la iska indho tiraa ama la saaraa dib-u-dhaca si hadhow loo horumariyo. Waxay duufaan ku ururinayaan boodhka gadaasha dambe, sidoo kale barnaamijka shirkaddaada.
Haddaan ahay ganacsiyada tikniyoolajiyadda ee 'Venture Capitalist' maalgalinta Webka 2+ adduunka, kuwani waxay ahaan lahaayeen waxyaabaha muhiimka ii ah. Haddii aadan ugu yaraan qorsheyneyn astaamahan, waxaan aaminsanahay inaan lacagteyda meel kale u qaadi lahaa. Haddii aan ahay rajo, inta badan waan sameeyaa.
Tags: codenaqshadeynta naqshadeyntaraadso saameynxarfahagoogle +iframeiframe jebiyahatemplate mashruucprwebgalinta ereyada
Jul 2, 2008 markay ahayd 8:46 AM
Fikraddaada ku saabsan qaabka hay'adda ee diiwaangelinta domainku waa mid cajiib ah. Taasi waa dhab ahaan waxa aan ugu baahanahay mid ka mid ah mashaariicdayda.
Jul 2, 2008 markay ahayd 9:48 AM
Waxaan gabi ahaanba jeclaan lahaa Muuqaalka Wakaaladda. Waxaan hayaa tan badan oo domains ah waxaanan jecelahay inaan ogaado in domainka dhabta ah uu ku diiwaangashan yahay magaca macmiilkayga weli wali waan haysan karaa kantaroolka 100% ee maamulka cinwaanka iyaga. Waxaan u maleynayaa in macaamiisha ay jeclaan lahaayeen tan sidoo kale waxay meesha ka saareysaa cabsida ah in la-taliyayaashu ay ugu diidi karaan magacooda domain haddii xiriirka ka dhexeeya uu xumaado.
Jul 2, 2008 markay tahay 9:58 PM
100% way kugu raacsan yihiin adiga Doug, oo ku saabsan API. iyo muuqaalka Wakaaladda idea Fikrad Xad dhaaf ah !. Codsiyada Websaydhka = Mustaqbalka